AIRTOX KL badbaadada kabaha | AIRTOX
AIRTOX Kabaha badbaadada ee GL55
GL55 waa midka ugu horreeya Airtox Hababka lagu soo bandhigo suuqa.
Qaabka ayaa si dhaqso leh caan ugu noqday dadka isticmaala xirfadlayaasha dalbanaya. GL55 si tartiib tartiib ah ayaa loo cusbooneysiiyaa, iyadoo la wanaajinayo labadaba qaab, raaxo iyo cimri dherer.
Xagga sare waxaa laga sameeyay maqaar nubuck oo la neefsanayo marka lagu daro dhar bixinta PowerBreeze® tikniyoolajiyadda. Intaas waxaa sii dheer font of GL55 waxaa lagu xoojiyaa lakabka waarta ee TPU kaasoo qaabkani ku habboon yahay howlaha u baahan jilbaha.
Qaabka ayaa leh midsoles leh Airtox nidaamka-hawada 3.0, oo bixiya heer aan la xakameyn karin dabacsanaanta iyo raaxada. Taam ahaanshaha qaabkani wuu ka sarreeyaa iyadoo injineeradayadu ay ku guuleysteen abuurista taam aad u ballaaran, oo raaxo leh oo kabaha ka dhigaya sidii kuwo sidii galoofis ah.
GL55 wuxuu ku qalabeysan yahay fududahay inuu dego ama baxo UTURN® Nidaamka xargaha lacageed.
Qaabka ayaa si dhaqso leh caan ugu noqday dadka isticmaala xirfadlayaasha dalbanaya. GL55 si tartiib tartiib ah ayaa loo cusbooneysiinayaa, iyadoo la wanaajinayo labadaba ...